के दुई मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड-नेपालतर्फ जाँदैछन् ? « Canada Nepal
के दुई मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड-नेपालतर्फ जाँदैछन् ?
काठमाडौँ। विपक्षी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधवार आयोजित सभामा दुईजना मन्त्रीबारे दाबी गरेपछि धेरैलाई चासो छ त्यसमा कति सत्यता छ र छ भने ती मन्त्री को हुन्? उनले नाम नखुलाएका ती दुईजना मन्त्रीले आफूतिर आउने सङ्केत दिएको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ लागेका थुप्रै नेता-कार्यकर्ता आफूतिर फर्किन चाहेको बताउँदै उनले दाबी गरे, “भन्ने हो भने लामो सूची भन्न सक्छु, अरू त अरू उहाँ (केपी) ले बनाएका दुईजना मन्त्री पनि फर्किनका निम्ति मसित वार्ता गर्दैछन्।” उनले नाम नखुलाएपछि विभिन्न मन्त्रीहरूबारे अनुमान भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले त्यसबारे आफूले प्रतिक्रिया नदिने बताए।
‘भ्रम फैलाउने शैली’
उनको भनाइ थियो, “मन्त्रीहरूको बारेमा मैले जिम्मा लिन सक्दिन, त्यसैले त्यसबार कुनै टिप्पणी गर्दिन।” के ओलीको मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यहरूमा त्यस्तो असन्तुष्टि छ? खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
उनले भने, “हामीहरू नियमित सम्पर्कमै छौँ, कसैले उहाँसँग हाइ-हेल्लो गर्नुभएको होला, त्यस्तो सम्भावना मैले देखेको छैन, भ्रम फैलाउने उहाँको शैली छ क्यारे।” महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइन्।
उनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई बकवासको सङ्ज्ञा दिइन्। “कि त उहाँले नाम भन्न सक्नुपर्थ्यो,” मन्त्री महतोले भनिन्, “भ्रम फैलाउन उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो। त्यस्तो नसोचे पनि हुन्छ।”
प्रचण्डलाई छाडेका मन्त्रीहरू
पूर्वएमालेकी उनी पनि सुरुमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशमा आएका थिए। तर त्यसैदिन ओली नेतृत्वको नेकपाको प्रशिक्षकको सूचीमा उनको नाम पनि थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्रालयमै बैठकहरूमा व्यस्त रहेको उनको सचिवालयका सदस्यहरूले जानकारी दिए। सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसँग सम्पर्क हुन सकेन। मन्त्री साह सुरुमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका थिए।
मन्त्री चौधरीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफ्नो जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा त्यसविरुद्ध टिप्पणी गरेको बताइएको थियो। दुवैजना पूर्वमाओवादीका हुन्। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन।
कतिपयले ओली नेतृत्वको नेकपाको युवासङ्घभित्र देखिएको विवादलाई लिएर केही मन्त्री असन्तुष्ट रहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको पाइन्छ। प्रचण्डले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरिकनै “आफूहरूलाई चिडियाखानामा लग्नुपर्छ” भन्नेहरूलाई नराम्रो बुद्धि भएकाहरूको कोटिमा राख्दै आलोचना गरेका थिए। माघ २३ गते भएको केपी ओली पक्षको सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चिडियाखाना सम्बन्धी टिप्पणी गरेका थिए। बीबीसी
प्रकाशित मिति : माघ २९, २०७७ बिहीबार १० : १५ बजे